ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: မေတ္တာပဓာန
စာရေးသူ Unknown အချိန် 1:00 PM
ahphyulay October 24, 2009 at 12:18 AM
ကျေးဇူးတရားနဲ့ သံယောဇာဉ်တရားကိုကောက်ရလေးရဲ့ ဇာတ်
လမ်းမှာတွေ့ ရပါတယ်။စဉ်းစားမိတာက သံယောဇဉ်တွယ်
တွယ်မိရင် သူ့ အတွက်ပဲစဉ်းစားနေမှာပဲမဟုတ်လား။ မိဘ
မေတ္တာဆိုတာကလည်း မြစ်ရေတို့ လိုပဲ မြင့် ရာက နိမ့် ရာကိုပဲ
စီးစင်းနေတတ်တဲ့ သဘောပါလို့ ။
Nge Naing October 25, 2009 at 2:12 AM
စာမေးပွဲရာသီမို့ ကျွန်မ မရောက်ဖြစ်တာပါ။ အဖြစ်အပျက်ရော အရေးအသားပါ သိပ်ကိုကောင်းမွန်နေလို့ အချိန်မရပေမဲ့ ပြီးတဲ့အထိ ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်။ မိဘမေတ္တာနှင့် ခွေးတွေနဲ့ လူတွေကြား သံယောဇဉ်ကို ရေးသားထားတဲ့ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ကျွန်မ မကြာခဏ ကြုံတွေ့ကြုံဖူးတဲ့ အကြောင်းတွေကိုလည်း နေ့အားရင် ရေးဖို့ စိတ်ကူးရလာပါတယ်။ ကောက်ရမ ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
မိုးစက်အိမ် October 27, 2009 at 12:54 PM
ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့သစ္စာနဲ့ မေတ္တာတရားကို
ဖော်ကျူးထားတာ ရိုးရိုးလေးပါ ဒါပေမဲ့ အရမ်းကို
ပီပြင်ပါတယ်ဗျာ . . . ပို့ စ်သစ်လေးတွေဆက်မျှော်နေပါ
မယ်အစ်ကိုရေ . . . ကိုရေချမ်းအကြောင်းစရေးတဲ့ ပိုစ်
ကစပြီးလည်း အစ်ကိုလက်ရည်ပိုတက်လာတယ်လို့ 
သတိထားမိတယ်အစ်ကိုရေ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ ... :)
မောင်သီဟ October 27, 2009 at 8:26 PM
desertraindrops October 30, 2009 at 6:26 AM
မိဘမေတ္တာကတော့ အမြဲ စိးလျက်ပါပဲ ကိုချမ်းရေ။
ဒဏ္ဍာရီ November 20, 2009 at 8:55 PM
အရမ်းကို ဖတ်လို့ ကောင်းတဲ့ အရေးအသားပဲ ကိုချမ်းလင်းနေ။
လူတွေနဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေ ကြားထဲက မေတ္တာတရားတွေ ဖော်ကျူးထားတာ တကယ့်ကို ပေါ်လွင်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်သွားမိတယ်။ အော် မေတ္တာတရားရဲ့ ကြီးမားပုံပဲနော်။
ကောက်ရမ ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်ပါစေ....။